Vangaindrano… vaingan’angano | NewsMada
Efa endriky ny korontana na fipoahana sosialy ny zava-mitranga ao Vangaindrano? Fitakiana fitsaram-bahoaka, niafara tamin’ny fandroban’ny mpanararaotra nandoro trano. Resaka hatramin’izay ny hoe tsy fahatokisan’ny vahoaka intsony ny mpitandro filaminana, mpitsara; ny fitondrana ankapobeny, raha ny marina.
Fari-toe-javatra nanetsika ireo mpiray Dina ny fisian’ny lehilahy namono ilay tovovavy tany an-toerana. Na inona endri-javatra toy izany, na aiza faritra mety hisy azy: ahina hatrany ny fitakiana fitsaram-bahoaka, ny fidinana an-dalambe… Fikorontanan’ny fifandraisana eo amin’ny vahoaka sy ny mpitondra no antony?
Mety mahalikiliky sy mahadikidiky ny vahoaka ifotony, ohatra, ny hoe: ny olom-pirenena tsotra no ampiriatina lava amin’ny hoe fampiharan-dalàna, fanasaziana… Ireo vaventy mbamin’izay akaiky azy, saika vitavita sy tsy hitahita ho azy amin’izany: tsimatimanota noho ny kolikoly hoe avo lenta, kiantranoantrano…
Efa mba nisy ve ny ezaky ny mpitondra amin’ny hoe ambany lalàna avokoa ny olon-drehetra? Tsy mahato teny azy ny fisian’ny tsimatimanota: tsy inoana izay lazainy, tsy tanteraka. Mby aiza, ohatra, ny hoe tsy hanaiky fitsaram-bahoaka intsony ny mpitandro filaminana? Tsy vitan-dresaka, kabary, fampitandremana…
Sanatria, tsy fanekena ny fitsaram-bahoaka. Inona ny vahaolana azo antoka, maharitra, ho an’ny rehetra… ? Avy any ambony ny ohatra, raha tany tan-dalàna tokoa ny tany sy ny fanjakana. Raha mihatra amin’ireo tsimatimanota ny lalàna: tsy hitsaratsara fitondrana noho ny fanaovana kiantranoantrano ny vahoaka.
Ho foana ho azy ny fitsaram-bahoaka fa misy ny ohatra velona, raha tena mihatra ho an’ny rehetra ny lalàna? Raha tsy izany, ho vaingan’angano toy ny any Vangaindrano hatrany ny raharaha. Loza mihatra amin’ny firenena miainga any ifotony, raha tokony hiainga any an-dohany ny fampiharan-dalàna.
Sahy hampihatra lalàna amin’ireo tsimatimanota ve ny mpitondra sa mbola hampandry adrisa ihany? Efa tsy miandriandry sy tsy mandrimandry manana aretina ny vahoaka, matoa miseho sy mivaingana ny angano toy ny any Vangaindrano…